Business Coordinator (Code-37615) | Dagon Glory Co., Ltd. ﻿
The recruitment is Business Consultant Company located in South Okkalapa Tsp.
• Business Development Plan များရေးဆွဲရာတွင်ကူညီရန်
• Business Development နှင့်သက်ဆိုင်သော Market Research များပြုလုပ်ရန်
• သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချင်းများပြုလုပ်ပြီးအစီရင်ခံတင်ပြရန်
• အလားအလာရှိသော Customer များရှာဖွေချိတ်ဆက်၍ အနာဂါတ်လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်ရန်
• Business Development နှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
• English (4)skill ကျွမ်းကျင်သူဦးစားပေးမည်။
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• Presentation, Communication & Negotiation skill ကောင်းမွန်ရမည်။
We offer Salary :4Lakhs
Work location South Okkalapa Tsp.
Company Industry: Business Consultant
Business Coordinator Business Development jobless jobinyangon Dagon Glory Business Management Jobs Business Management Jobs Business Consultant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Bago Region 128 Days
Sagaing Region 202 Days